Ụlọ ọgwụ ụgbọ mmiri & Napụta Freimaurer-retten.de
20. February 2018 Oliver Bienkowski
Freimaurer-retten.de - Gaa ma zọpụta ndị mmadụ! Hospital ship
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 20. February 2018
Iji nyere mmadụ niile aka n'agbanyeghị agbụrụ ha ma ọ bụ okpukpe ha, nke ahụ bụ ozi anyị ọ dịkarịa ala n'ụwa nile na ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị a agbụ nke ndi mmadu, na nke mbụ usoro nke Mpaghara ọdachi & agha ka ha na-emekọrịta ihe. biko pịa Jikọọ ihe ederede gburugburu anyị crowdfunding zu support.
Ka ịmalite, anyị na-arụ ọrụ otu iji ala Nri Bakery iji kesaa nri na-adịgide adịgide n'oge ọdachi. Na mmiri, anyị na-agbalị ịzụta ụgbọ mmiri anyị dị ka Hospital ship chọrọ iji.
Achịcha achịcha mkpọ achịcha na mgbidi mgbidi. Na obosara 5 mita, nnukwu ọkụ dị ọkụ na North Africa
N'otu oge anyị chọrọ imegide agba izu megide chepụtara alụ ọgụ. Taa, anyị na-eche, ọ bụ mgbe ụfọdụ erughị anyị MasonsNabataghi echiche ndị a na-agbagha agbagha ugboro ugboro, ma na-azụ ahịa na ego anyị na Intanet ndị na-eche akụkọ ntụrụndụ & Nkwa kwere. N'otu oge ahụ, ndị Alakụba na-ekwuhie Freemasonry site na Hitler maka afọ 60. Ebe a ka anyị chọrọ ihe ọmụma ọha na eze iji mata ebe anyi na enyere aka. Ọzọkwa ụka nwere ịkwụsị freemasonry ikpe ikpe, ebe a ka anyị ga-eduzi ozi ihe omume & na anyị Ọrụ na mba ọzọ ụmụ amaala mara banyere Azụ nke Freemasonry.
A ga-eme ka ụgbọ mmiri na-akụ Moroccan ghọọ ụgbọ mmiri iji rụọ ọrụ na mpaghara agha na ndị mmadụ n'agbanyeghị mmalite ma ọ bụ okpukpe iji nyere aka.
Ndị kasị dị ọnụ ala ga-abụ ụgbọ mmiri ịkụ ụgbọ mmiri. Dabere na ole onyinye anyị na-anakọta, ma ọ bụ otu n'ime ndị ahịa anyị nwere ọgaranya n'etiti ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị na-akwado anyị, ọ pụkwara nnukwu ụgbọ mmiri enwe. Anyị chọrọ ka ụgbọ mmiri dị obere n'ụlọ ọgwụ ụgbọ mmiri Jiri gburugburu ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị arụ ọrụ na-arụ ọrụ ịwa ahụ na eze ọgwụgwọ agha na ebe ọdachi. Ugbua otu naanị ụlọ ọrụ & a Dentist Stuhl nwere ike ime ọtụtụ Zọpụta ndụ, Anyị na-echeta Oskar Schindler bụ onye kwuru, sị, "Onye na-azoputa nani otu ndu na-azọpụta ụwa dum ".
Okpokoro mmiri a na-agba mmiri bụ Fourcault ga-abụ ụgbọ mmiri ọgwụ dị mma ma nwee ike iji ya mee ihe ozugbo na agha Yemen.
Ugbu anyị ugbu a abụọ na-adịbeghị anya amụọ maka abụọ ọzọ n'ụgbọ mmiri Commandant Fourcault ndị dị na Antwerp bụ Aquarius & Dignitus, ochie echebe SOS Mediterranean na Cadiz. Ma ụgbọ mmiri na-onwem na 1.800.000 € oké ọnụ karịa agadi egbu azụ n'ụgbọ mmiri. N'ime Freemasonry e nwere ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị ndị nwere ike mfe na-ebu ọbụna ndị na-akwụ ụgwọ n'ime ụwa yinye Freemason, ma ndị a ka anyị nwere iji mee ka ụmụnna ime ihe iji lebara ọnọdụ nke ụwa & agba izu megide chepụtara. Iji mee nke a, anyị kwesịrị enyemaka nke Òtù Ụmụnna. Na gị na enyemaka, anyị na-eduzi gị mkparịta ụka na-ubi gburugburu oru ngo ndụ ezu na-akwado.
Aquarius agbapụtala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 30.000 na-ata ahụhụ ugbu a na Cadiz
N'ezie, nke a plan-adịghị emejuputa atumatu 3 afọ gara aga, nchoputa nke Pixel Inyeaka Foundation uru ụlọ ọrụ na-aga n'ihi na mkpebi na Masonic Relief na Works Agency, na-arụ ọrụ 2015 afọ ofufo maka nzukọ na ịgbasa na Africa ndị dị mkpa akụrụngwa nke mere na mgbe ya na ọnwụ ụmụnna ndị ọzọ ozi "Masonic nnapụta" nwere ike ịga n'ihu. Iji mezuo nke a, 2019 bịanyere aka n'ụlọ 3 afọ ọhụrụ na July, nke na - eme ka ọrụ anyị na saịtị dị na Morocco. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-azụ ala ahụ ma ọ bụ gbasaa ụgbọ ala ahụ.
Nwanna & Onye guzobere Freemasons Nnapụta na Freemason omenka Otmar Alt & Snoopy
Na ugbu a na ụmụnne m: "Gaanụ n'ime ụwa ma pụtara onwe gị dị ka a Freemason" - Nke a na-ghar set nwere na aka, ọbụna ma ọ bụrụ na anyị na-ewepụ ihe nile na atụ na ihapu otutu okwu nke Freemasonry. Anyị ga-atụle ma kpee ikpe site na nke a: Act!
Ihe ọkụ ọkụ 3 nke Masons na wheel nke ebighebi.
The logo nke "Save Masons"
Anyị na-arịọ European Union ka ha wuo mmiri na-ejikọta Spain na Morocco iji dozie ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-agba ọsọ ndụ na ndị na-agba ọsọ agha n'otu ụlọ ọrụ na-anabata ndị Europe.
N'ihi ọnọdụ anyị dị na Morocco, anyị nwere ohere iji wughachi ụgbọ mmiri, iji wuo nkà mmụta sayensị na ụlọ ndị ọzọ na ịmepụta ohere maka nkà na ụzụ. Dị ka nzukọ na-enweghị uru, PixelHELPER ga-esonye ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ma hụ na arụ ọrụ nke ịntanetị na ịntanetị. PixelHELPER abụrụla ihe mgbaru ọsọ nke inye nkwado mmekọrịta na ngwa ngwa nke enyere onwe ya aka.
Na mgbakwunye na vidiyo ndị dị na Dosenbrot bred, anyị na-ebukarị na vidiyo vidiyo site na ụgbọ mmiri. Anyị chọrọ enyemaka gị ịzụta ụgbọ mmiri ahụ. Ozugbo anyị chịkọtara 85.000 €, anyị na-azụta ụgbọ mmiri ịkụ azụ ma malite mgbasawanye na Morocco. Ọ bụrụ, n'ọnọdụ kachasị njọ, ego anaghị agbakọta ọnụ na ụbọchị 365 ọzọ, anyị ga-etinye ya na nri enyemaka anyị na-enweghị ike nri na Morocco.
N'ebe ahụ, anyị chọrọ igwe nri a na-eri nri, ihe na-ebubata ụgbọ mmiri na onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe mgbe ọ ga-eme ka ọtụtụ puku achịcha nchịkọta sie ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị wee debe ha na mpempe akwụkwọ. Ma anyị kwenyesiri ike na anyị chọrọ ịchekwa Masons ma nweta ego dị mkpa ọnụ.
Akaụntụ Paypal: paypal@PixelHELPER.tv
Akaụntụ: PixelHELPER Foundation na-abụghị uru GmbH
93 4306 0967 1190 1453 IBAN DE00
Okwu: Enyemaka maka ndị nọ n'ọnọdụ mberede
2015 gbalịrị PixelHELPER dị ka nzukọ mbụ mgbe Sea Watch na-enweta nnwere onwe Boojenleger n'ime Mediterranean
Ihe mere Masonic ji enwe mmetụta maka nzukọ
PixelHELPER, bụ mba na-abụghị nke na-abaghị uru na òtù ụmụ mmadụ na-achịkwa nke sitere na echiche nke Freemasons. N'ịbụ ndị ụda nke ụwa na-ada mbà, anyị na-aga n'ụzọ, dị jụụ na nchebe, na-atụghị egwu n'ihe ize ndụ, ihe mgbaru ọsọ dị elu n'uche iji chebe ụwa. Nkwenye siri ike bụ na ụkpụrụ nke mgbanwe France "Freedom, Equality Fraternity" ọ dị mkpa iji lụso ọgụ ugboro ugboro na enweghị mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị Masonic nke PixelHELPER chọrọ, dị ka n'oge mgbanwe French, iji chebe onwe ha megide ikpe na-ezighị ezi n'ebe ọ bụla ọ na-egosi. Kemgbe ọtụtụ narị afọ agafeela ihe ọma n'ụwa ma gbalịa bụrụ ihe nlereanya site na omume ha. Kwadoro okwu a: "Mara onwe gị!", Ndị òtù ahụ gbalịrị ịme ka agbụ mmadụ zuru ụwa ọnụ.
PixelHELPER tọrọ ntọala 2011 site na onye na-ese nkọ & ihe nkiri Oliver Bienkowski na ndị na-agba mbọ na 70, tinyere 6 ndị ọzọ freemasons. Freemasonry bụ òtù ndị enyi, otu agbụrụ na-achịkwa nke ọma, obodo nabatara ya na ọrụ nchịkọta ihe atụ, nke sitere na ọdịnala nke European Enlightenment. Na ọnọdụ ya dị mma nke mmadụ, nnwere onwe, nnwere onwe, ikpe ziri ezi, ịhụnanya maka udo na ndidi, ọ na-enye nhazi na ụkpụrụ maka echiche na omume nke ndị òtù ya.
Pro7 Galileo: Akwụkwọ banyere Freemason na pixelHELPER onye nchoputa Oliver Bienkowski
Kwue banyere Masons
"M ga-achọ ka ndị Masons na-anọchite anya Masons ga-adịwanye na ọha mmadụ. Taa, ọ dị anyị mkpa inwekwu ndidi na àgwà obi umeala iji mee ka ọha mmadụ nwekwuo mmadụ. "
kwuru Ignaz Bubis
Kedu ihe bụ Freemasonry?
Freemasonry abụghị onye aka ya, ọ bụghị ihe eji eme ihe, ma ihe dị mkpa, tọrọ ntọala n'ụdị mmadụ na bourgeois ọha mmadụ.
Nzube nke Njikọ Masonic bụ ịkụziri ndị òtù ya ezi mmadụ. Ihe nke a bụ mmegharị nke omume ihe atụ ndị e ketara site na huts nke oge ochie, nkuzi nke otu ihe dị mkpa nke mmadụ, ịzụlite ezigbo na mkpali nke ezi ọbụbụenyi na ịhụnanya ụmụnna. Onye ọ bụla kwesịrị ịgbasa ụkpụrụ ndị a n'èzí Lodge, kwalite Enlightenment ma megidegide ekweghị ekwe. N'ebe obibi ahụ, ndị òtù ahụ na-akwalite site na ahụmịhe nhekọrịta nke akara na ememe nke ọzụzụ onwe onye. Site n'ịkwalite ùgwù mmadụ, ịzụlite òtù ụmụnna, na ịme ọrụ ebere, ndị Masons na-achọ ịghọta echiche nke ụmụ mmadụ.
Masons na GDR
ORF: Akwụkwọ banyere Freemasons
Ihe PixelHELPER | Nkwupụta nke ọrụ enyemaka anyị na liveapp na TedX, Morocco Marrakech
Masonic light installation geometry, Dusseldorf Germany
Ebe a na-agbanye Laser nke "Site n'Ugwu" Orlando Attack, Dusseldorf Germany
Onye guzobere PixelHELPER ga - ezute Otmar Alt
Ihe PixelHELPER | Nzukọ nke onye nchoputa PixelHELPER Oliver Bienkowski na Otmar Alt otu n'ime Masonic a ma ama nke oge a.
Gaa na Masonic Museum
Ihe PixelHELPER | Gaa na Masonic Museum na Bayreuth
Ihe kacha mkpa nke Masonic Confederation
Ihe kacha mkpa nke Njikọ Masonic bụ ịdị n'otu nke echiche nduzi, na-akwado udo nke mba, ma na-eme ka ahụmịhe ihe atụ. Dị ka ndị òtù nke ọgbụgba ndụ nke ọma, ndị Freemasons na-akwado mmadụ, òtù ụmụnna, ndidi, ịhụnanya maka ikpe udo na ikpe ziri ezi. Dị ka obodo nke ndị mmadụ na-ejikọta ndị enyi, ebe obibi bụ ebe nkuzi maka ụkpụrụ ndị a. Freemasonry na-eje ozi dị ka njikọ ihe atụ nke internalization nke echiche na obodo. Nke a bụ ọdịiche ha nwere na mkpakọrịta ndị ọzọ niile nwere ihe mgbaru ọsọ yiri ya.
Dị ka mgbe ochie ajụjụ ọhụrụ na mgbe niile: Gịnị bụ Freemasonry? Ọ dị mkpa ịghọta Masonic Confederacy dị ka ịdị n'otu nke echiche, obodo na ihe atụ. Ụdị ọgbụgba ndụ a dịgasị iche iche na-eme ka ọchịchọ ụmụ mmadụ nwee ohere dị iche iche. N'ihi ya, onye nwere ike ịchọta ihe dị mkpa na ndị mmadụ na-ebi n'ụlọ, na nke atọ, na akara na ọdịnala, nwere ike ịnata n'etiti ọgbụgba ndụ ahụ. Freemasonry nwere afọ ojuju bụ naanị na mmekọrịta nke ihe niile dị na ya.
Onye guzobere PixelHELPER na Hessenquiz
Ndị Freemasons maara na ọ bụ na ndụ ka a kpọghaara ụkpụrụ ndị ha kwupụtara, ha mere ka o doo anya na ha nwere nsogbu ndị dị ugbu a, ha ga-enwetakwa ọhụụ ọ bụla. Njikọ Masonic na-ezere ịmepụta usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ghara itinye aka na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị-ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Kama nke ahụ, ụlọ ezumike kwesịrị ịbụ ebe a na-akwadebe ihe omume onwe gị site na ozi na nkwupụta ọnụ. Ndị Freemasons na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị omimi ha dị mkpa site na imeri ajọ mbunobi, site na ịmalite inwe mmetụta maka nsogbu oge na site n'ịgbalịsi ike ịchọ eziokwu.
Masons maara na ndụ bara uru nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị na-elekọta mmadụ chọrọ ihe abụọ: ịmara banyere ụwa nke mmadụ bi ma nwee ụkpụrụ ndị na-eduzi ihe. Ụlọ ezumike kwesịrị inye nduzi site na ozi na nkwonkwo nkwonkwo. Igosipụta ihe dị adị n'echiche nke mmadụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndidi, ịhụnanya maka udo na ikpe ziri ezi mmadụ nwere ike n'otu oge ahụ ịme mkpebi nbibi.
Ọ bụ eziokwu na Masons amaghị otú ụwa mmadụ ga-esi leba anya n'ụzọ zuru ezu n'ihi na ha na-ezere ịzụlite nkwupụta nke ọha na eze na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otú ọ dị, echiche nke ụmụ mmadụ na ndidi na-enye ha ohere ịchọpụta egwu na ime ihe ziri ezi.
Interview TV nke DW.DE, PixelHELPER Onye guzobere Oliver Bienkowski, Deutsche Welle TV, Berlin Germany
PixelHELPER kacha mma
Freimaurer-retten.de - Gaa ma zọpụta ndị mmadụ! Hospital ship July 19th, 2019Oliver Bienkowski
Android App Bahrain 13 Federal Chancellery China ego ego Daphne Caruana Galicia osisi ịta freeRaif nnwere onwe nke echiche Greece enyemaka ndi mmadu Chebe ndi oru nta akuko mkpọsa mkpọsa Catalonia Ịhụnanya amaghi oke Livestream Live iyi Enyemaka enyemaka Livestream Morocco NSA n'ụlọ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Akuku Orlando agha Saudi Arabia igweanu Help spanish mmiri Spirulina Uighurs Uyghur onwe United Stasi nke America ogwe aka ahia Ee anyị na iṅomi! nlekota oru